» यस्तो छ ‘ऐश्वर्य’को नालीबेली
यस्तो छ ‘ऐश्वर्य’को नालीबेली
नेपाली कथानक चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ छठको अवसर पारेर हिजो बिहिबारदेखि नेपालका विभिन्न हलहरुमा लागेको छ । स्पेशल ईफेक्टका साथमा करिब २ वर्ष लगाएर तयार पारिएको यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘ऐश्वर्य’ चम्किएला ? कस्तो छ कथा ?
नायक रमेश उप्रेतीको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा लिइएको ऐश्वर्य चम्किने वा नचम्किने दर्शकको हातको कुरा हो । चलचित्रमा स्पेशल ईफेक्ट र सुन्दर दृश्यका कारण सुरुवातमै दर्शकलाई आसा देखाए पनि बिचैमा चलचित्रले केही बेर दिक्क लाग्दो बनाउँछ तर पनि बिचबिचमा नायिका दिपिका प्रसाईको हट अवतारले दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ र त्यो दिक्क लाग्दो पललाई बिर्साईदिन्छ । नायक उप्रेतीको शालिन अभिनय र खलनायकका रुपमा देखिएका प्रशान्त ताम्राकारको दमदार अभिनयले दर्शकलाई दिक्क लाग्नबाट बचाउँछ । तर पनि कथाको हल्का प्रस्तुति र बिचैमा जोडिने विभिन्न उपकथाहरुले चलचित्रलाई फितलो बनाईदिन्छ ।
कथामा जब नायिका केकी अधिकारीको ईन्ट्री हुन्छ तब उनको केटाकेटीपन र चञ्चले अभिनयले दर्शकलाई पेट मिचिमिचि हाँस्न बाध्य गराउँछ । त्यसमाथि हाँस्य कलाकार तथा चलचित्रका निर्माता समेत रहेका निर्मल शर्माको ‘मोटु’ पात्रले दर्शकलाई रमाईलो प्रदान गर्छ । विशेष गरी सम्पत्ति प्राप्तीका लागि गलत बाटो र सही बाटो अपनाउनेबिचको युद्धको कथा हो ‘ऐश्वर्य’ । अनि आजभोलि ग्ल्यामरलाई विजनेशसँग कसरी जोडिन्छ र मोडलहरुको गलत प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कथालाई यसले बोकेको छ । नायक उप्रेतीले हेटौँडाको प्रेस मिटमा भनेजस्तै चलचित्रले ठूलै सामाजिक परिवर्तन गराउने कथा भन्दैन तर समाजिक कथा भने यसले बोकेको छ ।
चलचित्रको दरिलो पक्ष यसको गीतसंगीत र छायाँकनका लागि छानिएका सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरु नै हुन् । साथै पात्रहरुको छनौट पनि यसको विशेष पाटो हो । कथाले पनि यसको केही हिस्सा लिन्छ । त्यसका अलवा यसमा प्रयोग गरिएका स्पेशल ईफेक्ट र कलाकारहरुको अभिनय यसको सबल पक्ष हो ।
चलचित्रको सुधार्न आवश्यक देखिएको पक्ष भनेको यसको स्टोरी टेलिङ हो । बिचबिचमा टुक्राटाक्री कथाले यसलाई केही कमजोर बनाएको छ । साथै ब्याकराउण्ड स्कोरलाई पनि केही सुधारेको भए चलचित्र अझ राम्रो बन्ने थियो ।
पक्कै पनि बलिउड र हलिउडका चलचित्रसँग दाँज्यो भने यो चलचित्र कमजोर छ तर यदि नेपाली चलचित्रकै परिपेक्षमा हेर्ने हो भने नेपालमा नै यत्तिको चलचित्र बन्नु राम्रो पक्ष हो । नायक उप्रेतीले बिजनेससँग माया मिसाएर चलचित्रलाई मसालेदार बनाउने प्रयास गरेका छन् । जसमा उनी केही हदसम्म सफल भएका छन् । यदि नेपाली दर्शकले यो चलचित्रलाई बाहिरी देशका चलचित्रसँग नदाँजी हेर्ने हो भने यसले आफ्नो लगानी जोगाउने पक्का छ । साथै पहिलो र दोस्रो दिनमा हेटौँडाका साथै देशैभर देखिएको दर्शकको भिडले यसले राम्रै व्यापार गर्ने देखिएको छ ।
दम्पत्तिको प्रेमलाई प्राथमिकता दिने गीत
एउटा दर्दनाक कथा, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाको ब्युटी विथ अ पर्पोज भिडियोको वास्तविकता